Ambohijatovo : Azo sary ilay mpisoloky gaigilahy -
AccueilRaharaham-pirenenaAmbohijatovo : Azo sary ilay mpisoloky gaigilahy
22/02/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tsy kely lalana ny ratsy, ary saika ny andavanandrom-piainan’olona rehetra amin’izao fotoana izao dia miaina izany avokoa. Ny resaka fisolokiana no anisan’ny malaza sy hataon’ireo olon-dratsy fitadiavam-bola, raha resaka halatra sy vaky trano no tena be mpanao indrindra. Hafa mihitsy indray ny fomba fiadin’ity lehilahy iray izay manao ity asa ratsy ity eny Ambohijatovo eny. Toa izao ny fomba fiadin-dranamana amin’ny fanatanterahana ny fikasan-dratsiny. Mijorojoro eny amin’ny manodidina eny izy, ary mikopakopaka ireo fiara mandalo eny amin’iny lalana iny , izay efa tazaniny dieny mialoha ireo izay ho asiany. Rehefa mijanona ireo fiara sakanany, izay kendreny ho ny saofera ihany no ao anatiny dia mody miseho mahafantatra an’ilay olona mitondra izany ity farany. Mampiresaka ary manaka-dresaka mihitsy izy mba hanababoana ny fon’ilay olona, ary rehefa izany dia mangataka ny hiditra ao anaty fiara ny tenany avy eo. Eo no miseho ny tantara. Fahony avokoa ireo zavatra rehetra eo ambany masony, ka rehefa azony izay hitany, dia mivoaka avy hatrany izy , ary mitsoaka manao tari-dositra.
Ny vola any anaty poketra no isany alainy ary ireo vehivavy sy olona efa somary nahazo taona no tena hanaovany ity asa ratsiny ity. Tsy vao olona iray no voan’ ity lehilahy ity fa efa maromaro ihany. Tsy ireo mpitondra fiara irery ihany koa no petahany, fa lasibatra hatramin’ireo mpandeha an-tongotra. Ankoatra an’Ambohijatovo dia hahitana azy ihany koa eny amin’ny faritr’Ampandrana sy B el’Air iny. Maro tamin’ireo olona izay efa tratrany ihany koa no milaza fa eny amin’ny Pochard sy Ampefiloha isan’ireo toerana hamelezany. Mifindrafindra izy mba tsy hisy hahatsikaritra. Mila mailo noho izany ny rehetra amin’ny fisehon-javatra tahaka izao. Miseho amin’ny endriny maro ity asa ratsy ity ary manao izay fomba rehetra hahazoany vola mora foana ireo olona ankehitriny. Miseho amin’ny endriny maro ny resaka fisolokiana ary misy mihitsy aza ireo efa sahy misandoka ho mpiasam-panjakana. Sarotra noho ireo zava-misy ireo no mahatoky olona amin’izao vanim-potoana iainantsika izao, ka tokony hahay handray lesona ny rehetra.
Fodian-dRavalomanana : Heloky ny Filoha ve?
Ny faha-28 aogositra 2010 no nivoaka ny didim-pitsarana manameloka an’i Marc Ravalomanana higadra mandra-pahafatiny noho ny raharaha 7 Febroary 2009. Tsy nanatrika ny fotoam-pitsarana azy ity filoha teo aloha ity tamin’izany fotoana noho ny tsy ...Tohiny